Home » General » ကမ္ဘာကျော်ရူပဗေဒပညာရှင် (၇၆) နှစ်အရွယ် Theory Of Everything : Stephen Hawking ကွယ်လွန်
ကမ္ဘာကျော်ရူပဗေဒပညာရှင် (၇၆) နှစ်အရွယ် Theory Of Everything : Stephen Hawking ကွယ်လွန်
In General, News On March 14, 2018
- Updated March 14, 2018
ကမ္ဘာကျော်ရူပဗေဒပညာရှင် Theory Of Everything : Stephen Hawking ဟာ ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲ Cambridge ရှိ နေအိမ်မှာပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြ​ောင်း ၎င်းရဲ့မိသားစု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Prof; Hawking ဟာ ကျောင်းသားဘဝမှာကတည်းက Black Holes အကြ​ောင်းကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့ပြီး “A Brief History of Time” အပါအဝင် အခြားလူကြိုက်များတဲ့ သိပ္ပံစာအုပ်တွေကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ အသက် ၂၁ အရွယ်မှာပဲ လူဂီးရစ်ရောဂါလို့လူသိများတဲ့ ဝေဒနာကိုစတင်ခံစားခဲ့ရပြီး ဒုက္ခိတဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီရောဂါဝေဒနာကြောင့်ပဲ Hawking ဟာ နောက်နှစ်အနည်းငယ်သာအသက်ရှင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Hawking ဟာ ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့ပဲသွားလာနိုင်ပြီး Voice Synthesiser လို့ခေါ်တဲ့ စာလုံးမှအသံထွက်ပေးတဲ့ ကိရိယာနဲ့သာစကားပြောခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Prof; Hawking ဟာ Quantum Mechanics (ကွမ်တမ် မက္ကင်းနစ်) နဲ့ပါတ်သတ်ပြီးများစွာထောက်ပံ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်သူဟာ သင်္ချာပညာရှင် “Sir Roger Penrose” နှင့်အတူတွဲကာ Black Holes ရဲ့အလယ်ဗဟိုတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လွန်စွာကွဲပြားသည့် အရာများရှိနေကြောင်း သင်္ချာနည်းအရသက်သေပြရန် နည်းစနစ်သစ် တစ်ရပ်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး Black Holes မှဖြာထွက်တဲ့စွမ်းအင်အက​ြောင်းနဲ့ပါတ်သတ်ပြီးလည်း တွက်ချက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိနေတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေလက်ခံထားကြတဲ့ Black Holes ကနေဘယ်အရာမှမလွတ်မြ​ောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို Prof; Hawking ကပယ်ဖျောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်တဖြ​ေးဖြ​ေး Black Holes ကနေဖြာထွက်ရ​ောင်ခြည်ထုတ်လွှင့်တယ်ဆိုတာကို အခြားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလက်ခံခဲ့ကြပြီး “Hawking Radiation” လို့လူသိများလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Stephen Hawking ကို ၁၉၄၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာ Oxford, England မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။
Cambridge မှာ PhD ဘွဲ့အတွက်လေ့လာမှုမပြုလုပ်ခင် ၁၉၅၉ ခုနှစ် Oxford University မှာ သဘာဝသိပ္ပံကိုလေ့လာခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၃ မှာ သူ့ရဲ့ အာရုံကြောရောဂါကြောင့် နောက်ထပ် အသက် ၂ နှစ်သာ သူအသက်ရှင်နိုင်တော့မယ်လို့သိခဲ့ပါတယ်။
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှာ Jane Wilde Hawking နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ၃ ဦးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။ ၎င်း၏ ခြေလက်အင်္ဂါများ ယခင်ထက် မလှုပ်နိုင် မရှားနိုင် ဖြစ်လာသည့်အခါ Jane က သူ၏ လိုအပ်ချက်မှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းရန် ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ် ပြုပေးခဲ့သည်။
၁၉၇၄ မှာ Black Holes မှထုတ်လွှင့်ရောင်ခြည်ကို “Hawking Radiation” သီအိုရီအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
၁၉၈၈ မှာ ၎င်းရဲ့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်တဲ့ “A Brief History of Time” ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး စာအုပ်ပေါင်း ၁၀ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရတဲ့အထိလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။
Jane နှင့် ၂၅ နှစ်တာ အိမ်ထောင်သက်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် Prof; Hawking ရုတ်တရက် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် သူ့အားပြုစုပေးခဲ့ဖူးသည့် သူနာပြုတဦးကို လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ Stephen Hawking ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Theory Of Everything ရုပ်ရှင်ကို Eddie Redmayne သရုပ်ဆောင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။
” ဒုက္ခိတဖြစ်နေတဲ့ ပါရမီရှင်တစ်ဦးရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ဘယ်သူမှ လွန်ဆန်လို့ မရပါဘူး “
Topics: RIP Stephen Hawking
Previous Post [India Launched] Dual Camera/ Face Unlock/ Portrait Selfie/ ပါဝင်တဲ့ Redmi Note5Pro
Next Post သင့်ရဲ့ iPhone Battery အကုန်မြန်စေသည့် အကြောင်းအရင်း (၅) ချက်
Special Edition (PRODUCT) RED iPhone 8/ 8 Plus ကို Apple ကြေငြာ
April 9, 2018 3540CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
မနေ့ညပိုင်းကထွက်ခဲ့တဲ့ Rumor သတင်းတွေအရ ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာ Apple ကနေပြီးတော့ iPhone 8 & iPhone 8 Plus Special Edition (PRODUCT) RED ကို သူ့ရဲ့ Apple Store ပေါ်မှာ Announces
iPhone Players များထံမှတစ်နေ့ဝင်ငွေ2သန်းရနေသော Fortnite Game
April 9, 2018 4530CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
Epic Games Company ကနေ အရင်လကမှ ထုတ်ခဲ့တဲ့ Fortnite Online Games (Mobile Version) ဟာဆိုရင် တခြား နာမည်ကြီး Games တွေဖြစ်တဲ့ Candy Crush,Clash of
Apple ရဲ့Co-Founder Steve Wozniak Facebook အသုံုးပြုမှုရပ်ဆိုင်း
April 9, 2018 3470CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
Apple Inc. ရဲ့ Co-Founder တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Steve Wozniak ဟာ ဒီအတောအတွင်းမှာမှ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ Facebook Users တွေရဲ့ Personal Data တွေပေါက်ကြားခဲ့မှုတွေအပေါ်မှာ စိုးရိမ်ပူပန်တဲ့အတွက် Facebook အသုံုးပြုမှုကို မနေ့ကရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့
My name is Than Dana, from Toungoo, Bago, Burma. Now, I live in Yangon. I stand asaprofessional at IT fields and has been sharing, inventing and advancing tech developments since 2008.
April 9, 2018 - 0
iDevices တွေမှာ Apps Notification Badges ကို ဘယ်လိုပိတ်မလဲ ?
April 8, 2018 - 0
Than Dana ဒီေလာက္ဆိုၾကမ္းလို႔ရၿပီ 😂😂😂 https://t.co/O1gS2920JP
Than Dana Special Edition (PRODUCT) RED iPhone 8/ 8 Plus ကို Apple ေၾကျငာ https://t.co/49V11jkWUb
Than Dana Mi Mix 2s မှာသာ Wireless Charging စနစ်ပါဝင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Mi Mix 2s ဟာ Xiaomi ရဲ့ Wireless Charging စနစ် ပထမဦးဆုံ… https://t.co/WwU1HOJtyo